सोरियाका गाउँहरू, बसाइएको स्पेनको आश्चर्यकर्म | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | | गेटवे
सोरिया शहरहरू तथाकथितको हो "जनसंख्यायुक्त स्पेन" तर तिनीहरूले यसको लागि आफ्नो अपील गुमाएका छैनन्। वास्तवमा यी शहरहरू मध्ये केही हाम्रो देशको सब भन्दा सुन्दर बीचमा छन् र ती तपाईंलाई भेट्न योग्य छन्।
यी सहरहरू जस्तै अतीतका साथ भएका छन् मेडिनासेली, पौराणिक लडाईहरूको दृश्य Calatañazor वा असंभव प्राकृतिक वातावरणमा स्थित जुन गुरुत्वाकर्षणलाई अवज्ञा गर्दछ रेलो। ठीक यसको परिदृश्यको सौन्दर्य र यसको स्मारकहरूको भव्यता मुख्य आकर्षण हो जुन सोरिया शहरहरूले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ। यदि तपाईं तिनीहरूलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई पढिरहन प्रोत्साहन दिन्छौं।
1 सोरियाका गाउँहरू, समयमै फिर्ता यात्रा
1.1 बुर्गो डि ओस्मा
1.2 Calatañazor, एक पौराणिक युद्ध
1.3 बर्लंगा डे डुएरो, एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण
1.4 मेडिनासेली, सोरियाका शहरहरूमा अर्को रत्न हो
1.5 रेलो, एक असम्भव स्थान
1.6 Yanguas, सोरिया को शहरहरु को बीच एक आश्चर्य
सोरियाका गाउँहरू, समयमै फिर्ता यात्रा
यति धेरै स्मारक सम्पदा शहरहरूको घर हो Soria त्यो उनीहरूको भ्रमण गर्नु भनेको त्यस्तै हो समय यात्रा। हामी तपाईलाई एक लेखमा देखाउन सक्दैनौं। तर निश्चयतापूर्वक आश्वासन दिनुहोस् कि हामीले हेर्न गइरहेका व्यक्तिहरू आफ्नै अधिकारमा सोरिया प्रान्तमा सब भन्दा सुन्दर छन्।
प्राचीन एपिस्कोपल शहर र ऐतिहासिक कलात्मक परिसर १ 1993 XNUMX Since देखि, बार्गो डे ओस्मा तपाइँलाई सुन्दर प्रदान गर्दछ प्लाजा मेयर १ XNUMX औं शताब्दी। तर तपाईले यसको भव्य भ्रमण गर्नु पर्छ ग्रहणको सेन्ट मरियमको क्याथेड्रल, यसको प्रभावशाली गोथिक पोर्टलको साथ। यो पनि राम्रो छ सैन Agustín को पुरानो अस्पताल, जो Alcázares de los Austrias को मोडेल प्रतिकृति गर्दछ।
सैन Agustín को पुरानो अस्पताल
यसबाहेक, सान्ता क्याटालिना विश्वविद्यालय यो एक सुन्दर प्लेटेरिक भवन हो जुन अब होटलमा रूपान्तरण गरिएको छ। र शहरको बाहिरी भागमा तपाईंसँग एकको अवशेषहरू छन् महल त्यो प्रहरीधरहरा देखि क्षेत्र हावी। को सान्ता क्रिस्टिनाको चर्च यो एउटा सुन्दर रोमान्स्क भवन हो र सान्तो डोमिन्गो डे गुज्मनको सेमिनरी को कारणले गर्दा एक neoclassical काम हो फ्रान्सेस्को साबातिनी.
तर बर्गो डि ओस्माको प्रतीक हो बाँदर फव्वारा, जुन तपाईं आर्केड सडकहरूमा पुग्न सक्नुहुनेछ जुन लोकप्रिय वास्तुकलाको घर बनाउँदछ। र भिला पनि एक छ रोमन ब्रिज उसेरो नदीमा। अन्तमा, यो शहर मार्गको अंश हो Cid को मार्गविशेष गरी, 'एल डिजाइरो' को रूपमा बप्तिस्मा गरिएको खण्डको।
Calatañazor, एक पौराणिक युद्ध
कालाटाजोरको सानो शहर सोरियामा पनि सबैभन्दा सुन्दर शहरहरू मध्ये एक हो, तर यसले आफ्नो प्रख्यात लडाईलाई श्रेय दिन्छ जुन यो भनाइ अनुसार, "अल्मानजोरले आफ्नो ड्रम गुमाए"। यद्यपि मुस्लिम नेताको सेना र सान्चो गार्सियाका सेनाहरूबीच त्यस्तो लडाई छ भन्ने कुरामा कुनै निश्चितता छैन, तथापि यो निश्चित छ कि अल्मानजोर भागेर अन्ततः नजिकैको मेडिनासेली शहरमा मरे, जसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्नेछौं।
किस्सालाई पन्छाएर, Calatañazor सँग एक सुन्दर स्मारक सम्पदा छ। उसको महल, धेरै राम्रो संरक्षित र चौधौं शताब्दी देखि डेटि। छैन। तर, सबै भन्दा माथि, आफ्नै आफ्नै शहर घरहरू, मध्ययुगीन निर्माणको र कब्बल सडकहरूमा अवस्थित। हामी तपाईंलाई यस शहरमा समयमै स्थिर भएको हेर्न पनि सल्लाह दिन्छौं सान जुआन र नुएस्ट्रा सेओरा डेल कास्टिल्लोको चर्चहरू.
तर Calatañazor यसको लागि समान रूपमा प्रसिद्ध छ सबिनार, एक प्रभावशाली जुनिपर वन जो सोरिया प्रान्तको मुख्य प्राकृतिक भण्डार मध्ये एक हो।
बर्लंगा डे डुएरो, एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण
बर्लंगासँग पनि एक प्रभावशाली प्राकृतिक ठाउँ छ। यो बारेमा छ अल्टोस डी बराहोना क्याल्केरियस चट्टान र स्थानीय प्रजातिहरूको साथ एक महान बेकार भूमि घोषणा गरीएको छ सामुदायिक चासोको स्थान y चराहरूको लागि विशेष संरक्षण क्षेत्र.
यस प्राकृतिक आश्चर्यको साथ, बर्लंगा डे डुएरोले तपाईंलाई एक शानदार प्रदान गर्दछ महल यसको पर्खाल संग १ XNUMX औं शताब्दी देखि। र तपाईं पनि कम सुन्दर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ सान्ता मारिया डेल मर्काडोको कलेजिएट चर्च, पुनर्जागरण इनभ्वाइस को यद्यपि मुख्य अल्टारको वेदीपिस चुर्रिग्रेस्की हो; को बर्लंगाको मार्क्विसको दरबार, समान रीनेसान्स; को Parees Albas कन्भन्ट र एकान्तताको हाम्रो लेडीको हर्मिटेज.
मेडिनासेली, सोरियाका शहरहरूमा अर्को रत्न हो
सोरियाको सहरहरूको हाम्रो भ्रमणमा हामी मेदिनासेलीमा आइपुग्छौं, जसले स्मारक सम्पदालाई जोड दिन्छ र प्राकृतिक ठाउँहरू लगाउँदछ। यो प्रामाणिक मणि महत्वपूर्ण रोमन अवशेषहरू जस्तै छ ट्रिपल आर्च र सेन्ट पीटर स्क्वायरमा प्रस्तरकला.
तर यसको पनि मूल्यवान छ प्लाजा मेयर संग डुकाल प्यालेस पुनर्जागरण शैली र Alhóndiga १th औं शताब्दी। दर्शनीय सान्ता मारिया डे ला असुन्सिनको कलेजिएट चर्च,aको अवशेष महल र सान्ता इसाबेलको कन्भेन्ट.
मेदिनासेलीको डुगल प्यालेस
साथै, मेडिनासेलीको वरपर पनि हो लैना बंजर भूमि, जो पनि छ सामुदायिक चासोको स्थान y चराहरूको लागि विशेष संरक्षण क्षेत्र। तर, थप रूपमा, यस मूरमा paleontological साइट छ सेरो पेलाडो, तल्लो Pliocene मा मिति।
रेलो, एक असम्भव स्थान
यो शहर अघिल्लो व्यक्तिहरूको रूपमा चिनिन सकेको छैन, तर यो अझै भ्रमणको लागि योग्य छ। एक हो पर्खाल मध्ययुगीन गाउँ जुन चट्टानको माथि अवस्थित छ। तसर्थ, यो सबै स्मारक हो। वास्तवमा यो को शीर्षक हो सांस्कृतिक रुचि को सम्पत्ति। तर तिनीहरू प्रकाश पार्छन् हाम्रो अस्मानी लेडी को चर्च, ला लस Angustias को Hermitage र टायन टावर, १० औं शताब्दीको वाचटावर जसले डुईरो नदी भएर जाने बाटोको सुरक्षा गर्थ्यो।
Yanguas, सोरिया को शहरहरु को बीच एक आश्चर्य
यहाँसम्म कि पर्यट सर्किटमा पहिलेको भन्दा कम सामान्य यang्गुआस हो, जे होस्, यो एक प्रमाणिक चमत्कार हो। को परिभ्रमण प्राकृतिक अन्तरिक्ष द्वारा घेरिएको सिडाकोस नदी र सहायक सहायक नदीहरू, सियरा डे क्यामरोसमा, याu्गवासको बहुमूल्य स्मारक सम्पदा छ।
यो उहाँको बनेको छ महल, १ XNUMX औं शताब्दीको मध्यकालीन गढी; को नदी र भिला को फाटकपुरानो पर्खालको अवशेषहरू, र सान लोरेन्जो चर्च, ढिला गोथिक मार्वल। तर पनि सान्ता मारियाको चर्च, १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित; को सभा गृह XVIII को; को सान मिगुएल टावर र मध्यकालीन पुल सिडाकोस नदीमा।
Yanguas नदी फाटक
अर्को तर्फ, यang्गुआसको वरपरका रूखको असंतुलित क्षेत्रहरू जस्तै मुगा, जहाँ तपाईं जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ डायनासोर पदचिह्न.
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई सोरियामा सब भन्दा राम्रा शहरहरू देख्यौं। तर त्यहाँ अरू धेरै छन् Magana, यसको नावाल डेल मार्क्वासको महल र यसको सैन्य मार्टिन डे टुर्सको गोथिक चर्चसँग; ओन्काला, जसको सान मिलनको चर्चले १० फ्लेमीस टेपेस्ट्रीसको प्रभावशाली संग्रह छ, वा विन्युसा, यसको रोमन ब्रिज र यसको भव्य साथ कालो लगान। के तपाईंलाई यस सुन्दर स्पेनी प्रान्तको भ्रमण जस्तो लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » सोरियाका शहरहरू